Next Generation CDN Technology dia momba bebe kokoa noho ny cache fotsiny | Martech Zone
Ao amin'ny tontolon'ny fifandraisana misy hyper, ny mpampiasa dia tsy mandeha amin'ny Internet, Internet an-tserasera izy ireo ary mitaky teknolojia vaovao ny matihanina amin'ny marketing mba hanomezana traikefa mpanjifa kalitao. Noho io dia maro no efa mahalala ny serivisy mahazatra an'ny a fifandraisana an-tariby (CDN), toy ny cache. Ho an'ireo izay tsy dia mahazatra loatra ny CDN, dia amin'ny alàlan'ny fitahirizana vonjimaika ny lahatsoratra tsy miova, sary, feo ary horonan-tsary amin'ny mpizara, ka amin'ny manaraka ny fidiran'ny mpampiasa ity atiny ity dia halefa haingana kokoa noho izy raha tsy nasiana cache.
Fa ity dia ohatra iray fotsiny amin'ny iray atolotry ny CDN. Ireo mpivarotra dia manararaotra CDN an'ny taranaka manaraka amin'ny fomba maro hifandraisana amin'ny mpihaino ary handresy ireo fanamby amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsy misy fangarony amin'ny fitaovana maro, ny fifandraisana isan-karazany sy ny rindranasa tranonkala sarotra kokoa.
Ireto misy asa lehibe sasany natao hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa:
Ho fanampin'ny fotoana fohy enta-mavesatra, ny fanamafisana ny fisianao tranokala ho an'ny fitaovana samihafa dia tena ilaina tokoa mba hamoronana traikefa mpanjifa mahafinaritra. Ny fampiasana ny famolavolana tranonkala (RWD) mamaly dia mety ho fomba iray mahomby manampy amin'izany. Ohatra, RWD dia miantoka fa rehefa mividy tranokala ny mpivarotra finday na takelaka dia mihena ny sary ary arakaraka ny tokony ho izy ny fananana hafa, noho izany ny mpampiasa dia tsy manandrana mivezivezy ny kinova amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny fametahana sy fametahana. Na izany aza, ny RWD dia manana fatiantoka matoa mety ho mora amin'ny fampidinana izy satria mandefa sary sy HTML mitovy amin'ny finday alefany amin'ny birao. Ny fampiasana RWD miaraka amin'ireo tranokala mampiavaka ny sisiny dia afaka mampifanaraka ny atiny atolotra an'ireo vondron'olona ary mampihena be ny haben'ny fampidinana pejy ary mampitombo ny fahombiazany.
Fanamafisana ny sary adaptive
Na dia hataon'i RWD tsiranoka aza ny sary mba hifanaraka tsara amin'ny haben'ny efijery ao amin'ny fitaovana, dia mbola hampiasa sary mitovy habe amin'ny sary aseho eo amin'ny birao. Midika izany fa ny mpampiasa anao amin'ny 3G miadana na tambajotra latency ambony dia takiana amin'ny fampidinana sary izay megabytes maromaro mba hampisehoana azy ireo azy eo akaikin'ny haben'ny hajia. Ny vahaolana dia ny fandefasana amin'ny mpampiasa ny haben'ny sary sahaza ny toe-draharaha misy azy ireo ankehitriny. Ny famatrarana sary adaptive dia manantanteraka izany amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fifandraisana misy ankehitriny, ny fitrandrahana ary ny fitaovana ary avy eo mamehy ny sary amin'ny fotoana tena izy mba hanomezana fifandanjana eo amin'ny kalitaon'ny sary sy ny fotoana fampidinana mba ahazoan'ny mpampiasa mampiasa sary avo lenta nefa tsy mijaly amin'ny fampisehoana miadana .
EdgeStart - Manafaingana ny fotoana byte voalohany
Raha tsorina, raha toa ka mametaka atiny afa-tsy ny cache ianao, dia tsy mahazo tombony maro amin'ny fomba fanao amin'ny sehatra manan-tsaina. Ireo mpivarotra dia tokony hahay hitandrina sy mitaky ny haitao toa ny mpanjifany raha te hahomby. Ary raha toa ka toa mandroso io dingana io dia tsy voatery. Misy manam-pahaizana vonona hanampy anao hitarika anao amin'ny serivisy mety mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasanao sy ny mpampiasa anao farany.
Tags: akamaiedgestartfanatsarana faranypage speedmpandray anjara mavitrikaresshafainganam-pandehan'ny tranonkalahafainganam-pandeha
Jason Miller no Lehiben'ny tetikadin'ny varotra ao Akamai Technologies, iza no Akamai Intelligent Platform manome ny mpampiasa azy fampisehoana amin'ny Internet, fahombiazan'ny finday, fiarovana ny rahona ary vahaolana amin'ny fandefasana haino aman-jery mba hitantanana ireo pitsiny misy eo amin'ny orinasa an-tserasera, amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tambajotra misy mpizara mihoatra ny 170,000 manerana an'izao tontolo izao.